သတိပြုပီးသုံးစွဲပါလို့( ၀ါးတူလေးတွေကို) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သတိပြုပီးသုံးစွဲပါလို့( ၀ါးတူလေးတွေကို)
Posted by nyimalay on Feb 20, 2011 in News | 18 comments
၀ါးတူ ဆိုးကျိုး မသုံးစွဲမှီ သတိပြု
*အခုချိန်ကစပြီးသတိထားတော့နော်။ ဟုတ်ပြီနော်။ ပြောပြီနော်။
မပြောဘူးလို့မပြောနဲ့နော်။ ဟဲဟဲ။ *
Forward Mail မှပြန်လည်ဝေမျှသည်။
ကြောက်စရာကြီးတွေဘာလား။မြန်မာလူမျိုးတွေသုံးနေတဲ့ သစ်သားယောင်းမကကော ပိုးသတ်ဖို့လိုလားဟင်။
ကြာရင်တော့မကောင်းဘူးထင်တယ်….. တစ်ပတ်တခါ ရေနွေးနဲ့ပြုတ်ပေးရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်……….
ဖြစ်နိုင်တယထယ်……. ဒီမှာဒါတွေကြီးဘဲသုံးနေရတယ် ရာရီ(china)
မြန်မာတွေ သုံးတဲ့ ယောင်းမ က အသစ်မှာ သုံးရတာ အဆင်ပြေပေမဲ့ ဟင်းမွေပြီးရင်တော့ ဆီပေ သွားရင် မှိုတက်တတ်ပါတယ်။ အိမ်မှာတော့ သစ်သား ယောင်းမ သုံးရင် မှိုတတ် တတ်လို့ မသုံးဖြစ်တော့ဘူး။
ထမင်းအိုး သီးသန့် မွေတာ ဆိုရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ဆီပေသွားရင် ပြသနာ ရှိနိုင်ပါတယ်။
အရောက်ချွတ်ဖို့ ဓာတုပစ္စည်းတွေမသုံးဘူးလို့ထင်တာပဲ …..
အဲဒီလို အီးမေးလ်ကလာတာတွေတွေ့ရင် .. Hoax – အာရွှီး လို့ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းသဘောထားလိုက်ပါ..။
ပြီးရင် ..ကိုယ့်အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်စဉ်းစားကြည့်ပါ..။
နားလည်နိုင်တယ်ထင်တဲ့သူတွေမေးပါ..။ ဒီမှာလာတင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်.။
တတ်သလောက်တော့ ..ရှာဖွေစဉ်းစား ဖြေရှင်းပေးပါမယ်..။
တာဝန်တရပ်အနေနဲ့ ..စာတင်သူဟာ ..သူရခဲ့တဲ့စာ Hoax ဖြစ်ကြောင်း ..ဆိုင်ရာမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို .. အသိပြန်ပေးစေချင်တာပါပဲ..။
ဒီလိုနဲ့.. ဒို့မြန်မာတွေ အလိမ်ခံရတာက ..နည်းလာကြမယ်ပေါ့..။ ငါသိပြီးတာပဲဆိုပြီး ရပ်မထားစေချင်ပါ..။
အပေါ်ကစာရေးထားတာကိုလည်း .. Hoax – အာရွှီးလို့သတ်မှတ်ပါတယ်..။
Claim: Disposable chopsticks are loaded with carcinogens.
This isareal case, if happen you hadachance, you can try soak disposable chopsticks (usually they gave you when you take away something) for3to5minutes in hot water, and you will see bleach detergent dissolved in the hot water from the chopsticks.
If you can prepare yours own chopsticks at your office, it’s not only environmental friendly and it’s for your own good.
Inacampaign promoting healthy care in An Ning, professor Chew reminds people not to use disposable chopsticks, as almost majority of them are made in and imported from china. Before the production, the raw materials itself already grown with germs that are in multiply colors (fungus), and the first process was put in chemical to preserve the materials then after that they are washed with bleach (which believes are to be thousands times over the standards). And guess what? These chemicals could cause cancer, Carcinogen. Professor Chew didn’t use any disposable chopsticks anymore since she last visitedadisposable chopsticks manufacturing plant5years ago. In case she forgotten to bring her own chopsticks, she always put one in her bag, since it can be reuse again and again.
Professor chew said: if you were using disposable chopsticks in the past, and you insists going to use them for rest of your life. Don’t come and ask me why you have cancer.
ကိုရီးယား လိုမျိုး စတီး တူသုံး မလား
သစ်သား တူ သုံးမလား
ကော် တူ သုံးမလား
စတီး တူ ကတော့ လူတိုင်း မတတ်နိုင်ဘူး။
၀ါး တူ ကတော့ တချောင်းကို ဘယ်လောက်မှ မရှိဘူး
သစ်သား တူ ကတော့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ သုံးရင် မှိုတက်တဲ့ ပြသနာ ရှိတယ်
ကော် တူ ကတော့ အပူနဲ့ တွေ့ရင် ကောက်ကွေးတတ်တယ်။
မြန်မာ ပြည်မှာ တူကို အရောင် ချွတ်ရပါတယ်။
ဆာဖာပါတဲ့ ရေနွေးအငွေ့နဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် ဖွေးသွားတယ် ပြောတာ ကြားဖူးတယ် သေချာတော့ စက်ရုံ သမားတွေ ဆီ မလေ့လာဘူးပေမဲ့ သူများ ပြောတာ ကြားဖူးတာဘဲ။
၀ါးက အချိန် အခါနဲ့ ခုတ်ရတယ် ပြောကြပါတယ်။ အချိန် တချိန်ရှိတယ် အဲဒီ အချိန်မှာ ခုတ်ပြီး လုပ်တဲ့ ၀ါးတွေက အကုန် ပိုးပါတယ်တဲ့ ဘယ်လို ပိုးသတ်သတ် အဆင် မပြေဘူး ပြောပါတယ်။ ၀ါးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပတ်ကေး (ကြမ်းခင်း) အပြား တဲ့ အကြောင်း ဆွေးနွေးနေတာ ကြားဖူးလို့။
မိရိုးဖလာ ရှေးရိုးရာ သစ်သားတူကိုပဲ သုံးတယ် …
စတီးတူက ကိုင်ရတာ မ လွယ်ဘူး ။ ချောနေလို့ ဒီလို ၀ါးတူလေးတွေပဲ ဆင်ပြေတာ .. ။ နောက်ပိုင်း ဖိုက်ဘာ တူလေးတွေလည်း ထွက်လာပါတယ် … အရောင်စုံထွက်လာတာ ဖြစ်ပေမဲ့ အပူနဲ့ ထိရင် ကောက်ကွေးကုန်ရော .. တော်ရုံ အပူဆို မသိသပေမဲ့ ဟင်းအိုးထဲ ရောက်ရင်တော့ သွားညှပ်မိတာ ကောက်ကွေး အရည် ပျော်ရော ။
ကျောက်စိမ်းတူ ပဲသုံးတော့မယ်။ ငှဲ ငှဲ ငှဲ
တယ်… အလကားနေရင်းကြွားနေတယ် … လာလုလိုက်လို့ …
etone ရယ် ကျောက်စိမ်းတူ တစုံမှ 5000 လောက်ပဲရှိတာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ မေးလို့ရပါတယ်။ လာတော့ မလုပါနဲ့ ဟဲဟဲဟဲ။
Disposable-chopsticks ကို မ သုံး ဘူး ။ စတီး တူ နဲ့ ဇွန်း ကိုအ မြဲ ဆောင် ထား တယ် ။ သစ် တော ဖြုန်း တီး မှု ကို တဖက် တလမ်း က ခြိုးခြံ ဖြစ် တာ ပေါ့ ။
နာတို့ကတော့ စတီးတူပဲ သုံးသတွ….
မဟုတ်ပါဘူး ဦးကြောင်ကြီးကလည်း တူကမှပိုကောင်းတာပါ…………